Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » S.Pellegrino Young Chef Academy Award mmeri mara ọkwa
Kacha akpali akpali talent ịchọ na-eto eto chefs n'ụwa, kere site S.Pellegrino Young Chef Academy iji zụlite ọdịnihu nke Gastronomy, bịarutere nso nso na-ekpo ọkụ mgbede Satọde 30th October. N'oge Ukwu mechara of Asọmpi S.Pellegrino Young Chef Academy 2019-21, mgbe agbachara nri asọmpi, Jerome Ianmark Calayag, na-anọchi anya UK na Northern Europe Region, ka ekwuputala dị ka onye mmeri nke S.Pellegrino Young Chef Academy Award 2019-21. Jerome na-adọrọ mmasị "Inine dị ala" Efere mbinye aka tụụrụ ime na mmekorita ya na onye ndụmọdụ ya, David Ljungqvist, tụrụ Grand Jury a na-akwanyere ùgwù na nhọrọ ya, nka ya, ọgụgụ isi, ịma mma nke efere na ozi dị n'azụ efere ahụ, na-eti ndenye sitere na ndị isi nri 9 ndị ọzọ nwere nka si gburugburu ụwa.
N'imeri aha a ma ama, Jerome Ianmark Calayag na-agbada n'akụkọ ihe mere eme n'akụkụ Ndị mmeri gara aga Mark Moriarty (2015), Mitch Lienhard (2016) na Yasuhiro Fujio (2018) ma, nke kachasị mkpa, na-eguzo dị ka mgbama nke ohere ka ọ na-amalite njem na-akpali akpali iji nyere aka ịkpụzi gastronomy nke echi. Ndị S.Pellegrino Young Chef Academy Competition họpụtara Nnukwu ndị ikpe nke isii ndị dike nke gastronomy zuru ụwa ọnụ - Enrico Bartolini, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smyth – Jerome masịrị ndị otu panel ahụ bụ ndị nwekwara mmasị na ụkpụrụ asọmpi n'ozuzu ya. Ezinụlọ S.Pellegrino na-egosipụta ekele Pim Techamuanvivit onye site na ahụmịhe ya nyere aka nke ọma na asọmpi ahụ, n'ime usoro ya dị iche iche, yana onye n'ihi mgbochi ọrịa na-enweghị ike ịgbaga Italytali maka mmemme Grand Finale.
Ewebata asọmpi nke afọ a atọ ọhụrụ enọ nke na-akwado S.Pellegrino Young Chef Academy Award ma gosipụta nkwenye S.Pellegrino na nkwado nke ike mgbanwe nke gastronomy na mmetụta ya gafere kichin. Elissa Abu Tasse, na-anọchi anya Africa na Middle East Region, na "Ogige Adam" bụ onye mmeri nke Acqua Panna Award maka Njikọ na Gastronomy, N'ịghọta ikike ya iji kwadebe efere mbinye aka na ihe ndị na-emepụta ihe ndị na-eme ka ọganihu nke omenala omenala ya pụta ìhè ma na-egosipụta njikọ zuru oke n'etiti omenala dị iche iche. Callan Austin, si Africa na Middle East Region, na "The ghost net" natara Akara S.Pellegrino maka Ọrụ Ọha, kenyere site Nri emere nke ọma nye onye isi nri nke webatara uzommeputa nke kacha anọchi anya usoro nri n'ihi omume ndi mmadu. Na n'ikpeazụ, online obodo nke Ndị hụrụ nri nri ọma ekenyere ya Ezi iri nri ndị hụrụ n'anya Nri maka echiche Award na Foto nke Andrea Ravasio, sitere na mba Iberian na Mediterranean, dị ka onye isi nri na-eto eto bụ onye kacha gosipụta nkwenye onwe ya n'ime efere mbinye aka "El domingo del campesino".
Asọmpi S.Pellegrino Young Chef bụ isi ọrụ nke S.Pellegrino Young Chef Academy oru ngo, ulo oru S.Pellegrino n'afọ gara aga, na ebumnuche nke ịzụlite ọdịnihu nke gastronomy site na-achọpụta na-eto eto talent na ike ha na a atụmatụ nke agụmakwụkwọ, ndụmọdụ na ohere ahụmahụ. Mbipụta nke asọmpi a dị egwu karịa mgbe ọ bụla, ịhụ ndị na-achọ akwụkwọ sitere n'akụkụ ụwa niile. Ndị na-eto eto na-eto eto 135 gafere nhọrọ mbido wee sonye na nri nri dị ndụ n'ihu ndị juri mba ụwa sitere na mba ndị so na mpaghara 12 ahụ. Ndị mmeri mpaghara S.Pellegrino Young Chef Academy Competition bịarutere Grand Finale ka ha nwesịrị ụzọ ndụmọdụ n'oge nke, n'ihi nkwado nke onye isi nri, ha nwere ike imezi efere mbinye aka ha.
Ihe omume ụbọchị 3 mechiri n'eriri nri abalị pụrụ iche. Nnukwu gastronomy Massimo Bottura ya na otu ya - Takahiko Kondo, Riccardo Forapani, Francesco Vincenzi, Jessica Rosval na Bernardo Paladini. - ka ndị ọbịa ahụ nweta ezi mmụọ nke S.Pellegrino Young Chef Academy, gburugburu ebe a na-eme nkà, mmepụta ihe, ihe ọhụrụ, mmasị na ọkachamara. Massimo Bottura, dị ka onye nkuzi emume na onye nkuzi na-akpali akpali, guzoro n'akụkụ ya na ndị isi ise ahụ, iji mepụta oge nri ise pụrụ iche na nke pụrụ iche, nke ọ bụla na-emechi ụdị, mmụọ na akụkọ ihe mere eme nke otu ya.
Stefano Bolognese, Sanpellegrino International Business Unit Director: "Anyị nwere obi ụtọ n'ezie maka ihe omume Grand Finale nke nyere anyị ohere ijikọ ọzọ na mmadụ na ịhụ ụfọdụ nkà nri nri dị egwu na-arụ ọrụ, ịmepụta ihe pụrụ iche ọnụ. Ya mere ekele diri ndị niile sonyere anyị n'akụkụ ụwa niile iji kesaa ịnụ ọkụ n'obi nke ụbọchị atọ a. Ọ dị ịtụnanya. Jerome na-enwu n'ezie n'ihu Grand Jury anyị a na-akwanyere ùgwù, na ekele anyị kacha mma na-agakwuru ya, na ọchịchọ ọ ga-eweta mmasị na echiche nke ya na tebụl iji nyere aka ịkpụzi gastronomy nke echi. Anyị chọkwara ikele ndị niile na-eto eto talent, protagonists nke njem a na-akpali akpali ma bụrụkwa ndị òtù S.Pellegrino Young Chef Academy: ha bụ ndị na-agbanwe egwuregwu n'ọdịnihu, anyị na-achọkwa ha chi ọma na ọrụ dị egwu. Ọchịchọ anyị maka nkà okike adịghị akwụsị ma anyị enweghị ike ichere ịkpọsa nkọwa ndị ọzọ gbasara mbipụta na-esote S.Pellegrino Young Chef Academy Competition”.